Pen pen nku nku nku $ 8 a na -azọpụta m narị narị na nhọpụta - Ịma Mma
Nke a $ 8 Pen na -azọpụta m narị narị na nku nku nku
N'ikpeazụ, enwere m ike nke nrọ m.
ochie navy unyi àmà ogologo ọkpa
Dị ka ọrụ elekere, m na -emebu nweta nku anya m ma ọ bụ mebie kwa ọnwa atọ. Ha bụ naanị zuru oke nke na enwere m ike ịwepụ oge nhọpụta nwere ọtụtụ oge n'etiti, ọ nweghịkwa onye ọzọ ewezuga m ga -achọpụta ihe dị iche. Mana mgbe m mechara mụta otu esi ete ha etemeete, enwere m nkụda mmụọ oge ọ bụla ha funahụrụ obere oghere ha izu ole na ole mgbe emechara ọkwa ọ bụla. Ntutu isi siri ike nke gbochiri pensụl na ihe nrụpụta m ịga nke ọma were oke iwe. Dika m chọrọ ịdeba oge nnọkọ, achọghị m ịtụgharị ya ka ọ bụrụ ụgwọ ọnwa. Na ihu ọma, ọ bụ gburugburu oge a ka m chọtara ụlọ ahịa ọgwụ: Nkume nkuanya Nad .
A bịa ịma mma, abụtụbeghị m ụdị DIY. Ihe e ji esiji ákwà nwere ihe na-emenye m ụjọ, ịcha ụcha n'ụlọ na-enye m nchegbu. Ọ bụghị na echeghị m na ndị mmadụ nwere ike ịme ọgwụgwọ mara mma n'ụlọ; ọ bụ na ọ na -adị m mma mgbe niile na m ga -agbarịrị ya. Mgbe mbụ m tụlere inye ihe n 'ime ụlọ ịnwale, ọhụụ nku anya niile na-efu na-agba egwu n'uche m. Nka m na -eme n'onwe m gbasapụrụ agbachapụ ụkwụ m, mana mgbe m lechara (na ịtụgharị) ngosi , M kpebiri na m ga -emikpu n'ime mmiri. Ọ tụgharịrị, ọ dị mfe na enweghị ihe mgbu, m na -emegharị nke m kemgbe ahụ.
Ngwa ahịa azụmaahịa na -ere ahịa n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ahịa ọgwụ ọ bụla (na $ 8 ruo $ 13, dabere na ebe ịzụrụ ya). Ọ na-abịa na nhicha nhicha iji kwadebe akpụkpọ ahụ gị, onye na-akpụ ya n'onwe ya (mkpịsị jupụtara na wax), na akwa owu iji wepụ ntutu. Nad na -erekwa a karịa $ 15 kit , nke gụnyere pensụl ego maka ịkpụzi na ude na-eme ka eme ka ahụ dajụọ. Ebe m nwalere ha abụọ, m ga -ekwu na ọ bụrụhaala na ị nwere pensụl anya n'ụlọ, ị ga -adị mma.
Iji eriri ahụ, m na -amalite na akpụkpọ anụ dị ọcha, ọ na -abụkarị ozugbo m saa ahụ. Ana m abanye na nhicha nhicha tupu m gafee na nzọụkwụ kachasị mkpa: ịkpụgharị ihe nchọgharị m. Aga m atụ aro ka iji pensụl anya ọkacha mmasị gị kama nke Nad nyere ebe a. (Na -amasị m ugbu a Pensụl goof na -egosi uru bara uru .) Ozugbo inwetara nkọwapụta siri ike nke ihu ọ bụla (ọ dịghị mkpa imeju ya), ọ ga -adị mfe idobe waksị ebe ịchọrọ ya. Iji nyere ya aka ịga n'ihu nke ọma, m na -atụgharị ngwaọrụ n'etiti aka m ugboro abụọ iji kpoo ya ọkụ, wee tụgharịa ala ugboro ole na ole iji nye ya.
onye bu onye mbu
M na -amalite n'etiti anya m na n'akụkụ ọkpụkpụ ihu m iji hichaa obere ajị ajị ajị na -eto ebe ahụ. Dị ka onye na -enwe ọdịdị zuru oke, m na -ahapụkarị elu naanị ya, mana maka nke ọ bụla. N'ikwu okwu site na ahụmịhe, a na m atụ aro ka ị were ọtụtụ waks kpuchie ọtụtụ obere mpaghara n'otu oge karịa ka ị chere na ịchọrọ kama ịnwa ime ya otu mgbe. N'ụzọ dị otu a, ị gaghị echegbu onwe gị maka iwepụ oke (egwu nke m) - ị ga -ahụ na warara ahụ ejikọtara nke ọma. Ozugbo i kpuchiri wax ahụ nke ọma, sere ya ụzọ na ntutu gị na -eto. M na -ekwe nkwa, ọ naghị afụ ụfụ. M na -achakarị ọbara ọbara mgbe mwepụsịrị ụdị ntutu ọ bụla, mana ọ bụrụ na m esoro onye na -ehicha ihe dị ọcha, toner na moisturizer dị jụụ, ọ ga -apụ n'anya n'ime nkeji 20 ruo 30.
N'eziokwu, ụdị nke ụlọ agaghị abụ nke ziri ezi dị ka ịkwụ ụgwọ iji mee nyocha gị, mana enwere m ike ịlaghachi ebe ahụ ụbọchị na-esote ụbọchị ma ọ bụ izu wee metụ mpaghara ọ bụla m nwere tweezers. Ana m achịkwa nke ọma ugboro ole m chọrọ ịme waksị wee nweta ego ụfọdụ n'otu oge. Ọzọkwa, enwere m obi anụrị ịkọ akụkọ na enwebeghị m ihe ọghọm ọ bụla nke na-ahapụ m ihu. Ị nwere ike were m dịka onye ntụgharị.
Nwepụ ntutu ntutu ncha ntutu nke Nad, $ 8, ulta.com
Iwepụ ntutu ntutu ncha ntutu nke Nad
$ 8 Ọlta Zụta ugbu a
Olivia Muenter bụ onye edemede na Philadelphia. Soro ya na @oliviamuenter .
na -egosi site na mbido 2000s
ugboro ole enwere mmewere isi awọ
ihe ị ga -eyi na akpụkpọ ụkwụ ọbọgwụ
ego ole ka egbugbere ọnụ injections eri